Kismaayo News » Nin London ku seeteeysan iyo kuwa kale oo orodada kaga qeybgalaya
Nin London ku seeteeysan iyo kuwa kale oo orodada kaga qeybgalaya
Kn: Intee ayuu la egyahay farqiga u dhaxeeya nin dabran iyo nin tartanka orodada aduunka ka qeybgalaya?. Xaaladani waa mid Soomaaliya ay ku muteysanayso tartanka ciyaaraha aduunka ee Olimbikada.
Nin dhalinyaro oo Soomaali ah oo ku nool London kaasoo lugihiisa lagu xirey qalab elektaroonik ah oo xadidaya dhaqdhaqaaqiisa socodka ayaa maxkamad lasoo taagayaa kadib markii uu dhaafay soohdin loo cayimey in uusan gudbin.
Ninkani oo sanadkii hore laga tarxiiley Soomaaliya isagoo markii Hore Britain ka noqdey xiriir uu la lahaa Alshabaab ayaa lagu soo rogey cunaqabatayn xagga dhaqdhaqaaqa, isticmaalka Kumbuyuutarka iyo waliba xiriirka uu la yeelanayo dadka kale.
Waxaase la sheegey in muddo shan jeer ka badan uu gudbey xuduudii loogu talogalay, isagoo waliba u talaabay dhanka xeendaabka meesha lagu qabanayo ciyaaraha olimbikada aduunka oo ah meel si weyn loo illaalinayo.
Waxaa kale oo la sheegey in uu isticmaalay gaadiidka Tareenka oo sidoo kale mabnuuc ka yahay in uu cag saaro.
Qalabka ku xiran ayaa lagala socdaa xarunta ciidamada amaanka, waxana qalabkaasi uu sheegayaa halka uu tagay iyo meel kasta oo uu cagta dhigo, waxa uu gaar ahaan yeerinayaa alaarmi haddii uu xuduuda ka gudbo.
Waxa uu ku xukumanyahay in uusan dhaafin deegaanka Norwich halkaasi oo qoys balaaran oo uu kasoo jeedo ay ku noolyihiin.
Waxaa lagu wadaa in maxkamad lasoo taago 27 bishan Luuliyo, maalintaasoo ay xusid mudantahay in ay tahay maalinta ciyaaraha ay furmayaan.
Iyada oo uu ninkaasi cag saari karin goobta ay ciyaaraha ka dhacayaan ayaa waxaa dhanka kale ciyaaraha Soomaaliya oga qeybgalaya labo ordaa oo kala ah gabar iyo wiil, waxayna kala yihiin Zamzam Maxamed Faarax iyo Maxamed Xassan Maxamed, kuwaasoo sawirkooda ka muuqdo kor.